စိုးပြည့်သ ဇင် နဲ့ ချစ်သူတွေ အဖြစ် ပရိသတ် က ထင်မြင် ယူဆချက် အေ ပါ် ဟိန်းဝေ ယံ ဘာပြောလဲ? (ရုပ်သံ) – Zartiman
စိုးပြည့်သ ဇင် နဲ့ ချစ်သူတွေ အဖြစ် ပရိသတ် က ထင်မြင် ယူဆချက် အေ ပါ် ဟိန်းဝေ ယံ ဘာပြောလဲ? (ရုပ်သံ)
အကယ်ဒမီ စိုးပြည့်သဇင်နဲ့ ချစ်သူတွေ အဖြစ် ပရိသတ် က ရှုမြင်နေကြသလို တွဲလည်း တွဲစေချင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံက မှတ်ချက်ပြုစကားပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦး ဘာကြောင့် ဇာတ်ကား တွေ တွဲရိုက်ဖြစ်တာ များနေသလဲဆိုတာကိုပါ ထည့် သွင်းပြောကြားသွားတာပါ။
အခုခါမှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အခြေအနေတွေ ကို အင်တာဗျူး မှာ ဖြေသွား ခဲ့ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ ပတ် သက်လို့ မှတ်ချက်ပေး ခဲ့ပါအုံးဗျ။ သ ရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံ ဆိုတာ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသဲစွဲ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပီး သူရဲ့ သရုပ် ဆောင်အနုပညာဟာလည်း တမူထူးခြားချက်တွေရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။အ ခုအခါမှာတော့ အကယ်ဒမီ စိုးပြည့်သဇင်နဲ့ တွဲတာ တွေများနေတဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်က ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပီလို့လည်း ထင်နေကြပါတယ်။စိုးပြည့်သ ဇင်ဟာလည်း ကိုကို ညီညီတို့ စွဲလမ်း ချစ်ခင်ရတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပီး အကယ်ဒမီရတဲ့အထိ တော်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စိုးပွညျ့သ ဇငျ နဲ့ ခဈြသူတှေ အဖွဈ ပရိသတျ က ထငျမွငျ ယူဆခကျြ အေ ပျါ ဟိနျးဝေ ယံ ဘာပွောလဲ? (ရုပျသံ)
အကယျဒမီ စိုးပွညျ့သဇငျနဲ့ ခဈြသူတှေ အဖွဈ ပရိသတျ က ရှုမွငျနကွေသလို တှဲလညျး တှဲစခေငျြကွတယျဆိုတဲ့အပျေါမှာ သရုပျဆောငျ ဟိနျးဝယေံက မှတျခကျြပွုစကားပွောပါတယျ။သူတို့နှဈဦး ဘာကွောငျ့ ဇာတျကား တှေ တှဲရိုကျဖွဈတာ မြားနသေလဲဆိုတာကိုပါ ထညျ့ သှငျးပွောကွားသှားတာပါ။
အခုခါမှာတော့ သူတို့နှဈဦးရဲ့ အခွအေနတှေေ ကို အငျတာဗြူး မှာ ဖွသှေား ခဲ့ပါတယျ။ ပရိတျသတျကွီးရော သူတို့နှဈယောကျနဲ့ ပတျ သကျလို့ မှတျခကျြပေး ခဲ့ပါအုံးဗြ။ သ ရုပျဆောငျ ဟိနျးဝယေံ ဆိုတာ နှုတျခမျးနီမလေးတှအေသဲစှဲ မငျးသားတဈလကျဖွဈပီး သူရဲ့ သရုပျ ဆောငျအနုပညာဟာလညျး တမူထူးခွားခကျြတှရှေိနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး ပရိတျသတျအခိုငျအမာနဲ့ ရပျတညျနတေဲ့ မငျးသားတဈလကျဖွဈပါတယျ။အ ခုအခါမှာတော့ အကယျဒမီ စိုးပွညျ့သဇငျနဲ့ တှဲတာ တှမြေားနတေဲ့အတှကျ ပရိတျသတျက ခဈြသူတှဖွေဈနကွေပီလို့လညျး ထငျနကွေပါတယျ။စိုးပွညျ့သ ဇငျဟာလညျး ကိုကို ညီညီတို့ စှဲလမျး ခဈြခငျရတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈပီး အကယျဒမီရတဲ့အထိ တျောတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဟာကနဲဖြစ်သွားလောက်အောင် Gymဆော့ကစားနေတဲ့ မအေးသောင်း